Somaliland dib ha u eegto siyaasaddeeda ku aaddan gobolka Sool
Shirkii u socday madax-dhaqameedyada Sool ee laga qabtay Boocame waxaa ka soo baxay baaq loo jeedinayo maamulka Somaliland. Arrin xun ma aha haddii Somaliland ay siyaasaddeeda dib u eegto sababo badan awgood. Waa marka hore e maamulka hadda Somaliland ka jira wuxuu sii xoojiyey siyaasaddii ahayd kala qaybinta dadka Sool iyadoo la magaacabayo dad Sool ka soo jeeda oo aan xiriir la lahayn reer Sool si ay maamulkaa uga mid noqdaan. Somaliland waxay muujisay in aysan wax qaddarin ah u hayn madax-dhaqameedka Sool kadib markii ay marti-qaadday Axmed Cabdi Xaabsade oo waraysigiisii BBCda ku dooday in madax-dhaqameedyadu aysan kaalin siyaasadeed lahayn.
Kal hore markii maamulka Puntland Xaabsade xil ka qaadis ku sameeyey waxaa Garoowe u soo galbiyey madax dhaqameedyo Laas Caanood iyo Buuhoodle ka soo kala jeeda. Hadallada Xaabsade waxay muujinayaan in Somaliland doonayso ku tumashada madax dhaqameedka Sool, madax-dhaqameedka dadka kala go'a tageersanna la dhowro si ay u furdaamiyaan dhibaatooyinka siyaasiyiinta abuuraan. Waa madax-dhaqameedyada kuwa xaqa dadku isku leeyihiin xeeriya. Waa siyaasiyiinta kuwa gobolka Sool dhibaatada u keenay, dano gaar ahna ku fushanaya maamulka Somaliland ee aan lagu aqoon la xisaabtanka ragga ay u aqoonsatay in ay wakiil ka yihiin dadka Sool deggan.
Mashaariicda siyaasadda waxa dhaawaca ama kufiya siyaasadaha isburinaya. Gefka siyaasadeed ee maamulka Somaliland galay waa isaga oo lugta la soo galay ishayn siyaasadeed oo ay wax ka qaban kareen madax-dhaqameedka Sool. Waxay u dhego nuglaadeen rag siyaasiyiin ah oo aan maanta Sool taageero ku lahayn.
Haddii ay Somaliland keentay aragtida kala go'a iyada ayaa looga baahan yahay in ay keento habkii arrinkaa looga wada hadli lahaa. Ilaa hadda taa ma dhicin, waxaana muuqata in siyaasiyiinta Somaliland ay indhaha ka laallayaan runta hor taal: in siyaasiyiinta reer Sool ay dadkooda kasban waayeen, kalana fogeeyeen dadka kala go'a doonaya iyo dadka midnimada doonaya.
Somaliland waa in ay mid xusuusataa: waxay ahayeen madax-dhaqameedyada sida marxuum Garaad Cabdiqani kuwa wax ka qabtay dhibaatooyinka siyaasiyinta Sool sameeyeen iyagoo leh ujeeddooyin siyaasadeed. Haddii maamulka Somaliland uu qaadan waayo talooyinka madax-dhaqameedka Sool, way adkaanaysaa in laga wada hadlo wax ka qabashada dhibaatooyinka siyaasaded ee taagan. Arrinkuna wuxuu noqon karaa mid keena nabadgalyo darro baahda oo jiitanta. Maamulkii marxuum Cigaal uun baa yiqiin dhibta ay geysan karaan siyaasiyiinta ismagacawday ee sheegatay in ay wakiil ka yihiin reer Sool. . In ay isku duubni dadka ay wakiilka ka yihiin ( waa sida ay sheegteenee) ka keenaan buu weydiin jiray. Tixgelin weyn buu u hayay madax-dhaqameedyada oo ah tiirka siyaasadda. Haddii Xaabsade intaa garan waayey oo uu meel kaga dhacay madax-dhaqameedka Sool, maantana hudheel Hargeysa ku yaal dhex jiifo la yaab ma leh. Kuwa illoobay sida Xaabsade dadka u kala fogeeyey intii uu Puntland ka mid ahaa, haddana aysan u muuqan sida uu u kala dhantaali karo wax kasta oo sees u noqon lahaa wada-hadal siyaasadeed, ayaa ah kuwo lala yaabo. Madax dhaqameedka Somaliland waa in ay kaalintooda same-ka-talinta qaataan oo weydiiyaan maamulka Somaliland waxa la gaari karo haddii la iska dhega tiro baaqa madax-dhaqameedka Sool ee Boocame ku shiray. Waa in loo arkaa baaq siyaasadeed. Somaliland oo dib u eegta siyaasaddeeda ku aaddan dadka midnimada doonaya ayaa horseedi karta horumar siyaasadeed iyo mid bulsho.